လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: March 2014
Monday, March 31, 2014 ဓါတ်ပုံ
Acer Aspire E1-510P-2671 Laptop Review
Monday, March 31, 2014 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Acer introduceanew laptop "Acer Aspire E1-510P-2671" which is having 8 GB of RAM, 15.6 inches touchscreen and running Windows 8.1 with 500 GB storage.
Processor Name: Intel Celeron N2920
15.6 inches Wide Touchscreen, 1366 x 768
Susten 100 ကိုယ်ဝန်မှာသုံးတဲ့ဆေးတမျိုး
Monday, March 31, 2014 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ
သမီးက ကိုယ်ဝန် ၇ လရှိပါပြီ။ ကိုယ်ဝန် စရှိတုန်းကတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ ဆရာဝန်က Susten 100 ကို မနက်တစ်လုံး ညတစ်လုံး သောက်ခိုင်းပါတယ်။ အခု ကိုယ်ဝန် ၇ လရှိပြီဆိုတော့ အလုပ်နား လိုက်ပါပြီ။ ဆရာဝန်က Susten ကို ဆက်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒါ Susten သောက်ရင် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါလားရှင့်။
• Susten ဆိုတာ Progesterone (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ဟော်မုန်းဆေးဖြစ်တယ်။ သန္ဓေသားကို သားအိမ် အတွင်းနံရံမှာ လာပြီး တွယ်ကပ်စေဘို့ရာမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်မြဲစေဘို့ သုံးရတာပါ။ သန္ဓေသားကပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲ အချင်းကနေ (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ကို လုံလောက်အောင် ထုတ်လာနိုင်တဲ့အချိန်ထိ ဆက်လုပ်ပေးနေပါမယ်။ ကလေးမွေးပြီးတာနဲ့ အချင်းကနေ (ပရိုဂျက်စတီရုန်) မထုတ်တော့ပါ။
• Susten Gel နဲ့ Susten 100mg injection ထိုးဆေးရှိတယ်။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးမှာ ဒီဟော်မုန်းက (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်းနဲ့ တွဲပြီး ကူညီပါတယ်။
• Endometrium သားအိမ်အတွင်းနံရံကို သန္ဓေသားကပ်ဘို့ အဆင်သင့်ဖြစ်စေမယ်။
• Placenta အချင်းကိုလဲ အလုပ်အတွက်ကူတယ်။
• Uterus သားအိမ်ကိုလဲ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်မလာစေအောင် တားပေးသေးတယ်။
• Breast နို့ကိုလဲ ထွားလာစေမယ်။
• Lactation နို့ရည်လဲ မမွေးမချင်း ထွက်မလာစေအောင်လုပ်တယ်။
• Mucus သားအိမ်အဝမှာရှိတဲ့ အချွဲကိုအားပေးလို့ အပြင်ကနေ ရောဂါပိုး ဝင်မလာစေနိုင်ဘူး။
• Pelvic walls တင်ပါးဆုံတွင်းနံရံကိုလဲ မွေးတဲ့အခါအတွက် အဆင်သင့် လုပ်ပေးမယ်။
- Fertility treatment (IVF) or GIFT ကလေးမရနိုင်သူတွေကို ဆေးအဖြစ် ဒီဟော်မုန်းပေးတယ်။
- Recurrent miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်တတ်သူတွေ၊
- Amenorrhoea ရာသီမလာဘဲနေသူတွေ၊
- Abnormal uterine bleeding သွေးပုံမှန်မဟုတ်ဘဲဆင်းနေသူတွေ၊
- Palliative treatment of advanced, inoperable endometrial carcinoma သားအိမ်ကင်တာ နောက်ပိုင်းအဆင့် ရောက်နေသူတွေအတွက် သုံးပါတယ်။
• ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ = ဝမ်းမမှန်ဖြစ်၊ အစာပိုစာချင်၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုး၊ တချို့မှာ ကျ၊ ကိုယ်ရောင်၊ ဝက်ခြံပေါက်၊ အရေပြားအနီကွက်ထွက်၊ စိတ်ကျ၊ ရင်သားအနေရခက်၊ ချောင်းဆိုး၊ အသက်ရှူခက်။
• Carbamazepine ဆေး၊ Phenytoin ဆေးနဲ့ Ciclosporinဆေးတွေနဲ့ တွဲမပေးသင့်ပါ။
လာမယ့် ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့မှာ ကျင်းပမယ့် Past & Present SOE THU LIVE @ Mandalay စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ
The Press Conference of "Past & Present SOE THU Live @ Mandalay", Soe Thu's One Man Show, was held at the Park Royal Hotel in Yangon on March 30, 2014. Myanmar well-known artist Soe Thu will host his Entrance-Free One Man Show at Aung Pin Lae Sports Ground in Mandalay, the second largest city of Myanmar, on April 11, 2014, two days right before Myanmar New Year festival. The Plus Three music band and MAJESTA music band will play amazing music for Soe Thu's Live Show. (Photos by Wai Yan)
Photo-tagging feature ကို Twitter ထည့်သွင်း
အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၁၄)
Twitter သည်ပြီးခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က ဓာတ်ပုံအတွင်းရှိ လူများကို tag ပြုလုပ်နိုင်သည့် feature ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီး tweet တစ်ခုအတွင်း ဓာတ်ပုံလေးပုံကို share ပြုလုပ်နိုင်သည့် feature ကိုလည်း ထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကုမ္ပဏီက ၎င်းတို့၏ Blog post တွင်၎င်း feature အသစ်များနှင့်အတူ ဓာတ်ပုံများဖန်တီးရာတွင် social အားကောင်းရန် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွင် လူ ၁၀ ဦးအထိ tag ပြုလုပ်နိုင်ကာ ၎င်းတို့၏ tweet အတွက်စကားလုံးရေ ၁၄၀ ထိခိုက်စေမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို tag ပြုလုပ်လိုလျှင် သုံးစွဲသူများက "Who's in this photo?" နှိပ်၍လူတစ်ဦး၏ username ကိုရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Twitter က tag ပြုလုပ်ခံရသည့် သူများထံသို့ notification များပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း setting ကိုလည်း user setting တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း နော်မန်ဒီကမ်းခြေမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေထံ Beer တွေ ဘယ်လိုပို့ခဲ့သလဲ...
Monday, March 31, 2014 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
လာမယ့် ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့မှာ ကျင်းပ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း နော်မန်ဒီကမ်းခြေမှာ တိုက်ပွဲဝင်...
ဒီနှစ်က သူ့အတွက် မင်္ဂလာ ရှိတဲ့နှစ်ပါပဲလို့ ဖွင့်ဟလာ...
ကင်ဆာရောဂါအတွက် လေဆာနည်းပညာသုံး ဆေးအာနိသင် ပို့ဆော...
ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှ အဆီကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်းကို အစ...
အမျိုးသမီးအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံမှုမှ HIV ကူးစက်နိုင...
အသက်သေဆုံးနိုင်ချေ ရှိမရှိသိနိုင်မယ့် သွေးစစ်ဆေးမှု...
ဦးနှောက်လုပ်ငန်း အားနည်းလာခြင်းကြောင့် ဆေးလိပ်ဖြတ...
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) ရှားတဲ့ ကင်...
Online Payment စနစ်မရှိသေးခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်း O...
အိန္ဒိယနိုင်ငံသား Mr. Ganesh Subramaniyam ဖန်တီးထား...
လင်းလင်း တို့စုံတွဲရဲ့ The Music ဆိုင် အကြောင်း
၂ဝ၁၄ သင်္ကြန်ကို ရန်ကုန်မှာနွှဲမယ့် ခင်ဘုဏ်း
လာမည့်ပညာသင်နှစ်မှစပြီး ကျောင်းချိန်အတွင်း မွန်စာသ...
တည်နေရာကို အလင်းရောင်ဖြင့် ဖော်ပြပေးမည့် LED ဂေါက်...
Autodesk AutoCAD Raster Design 2014 With Patch
မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျ...
iOS 7.0 (Build 11A466) Jailbreak Error ကို ဖြေရှင်...
DriverPack Solution 14 R411+14.03.3 (DVD-ISO/x86/x...
နန်းခင်ဇေယျာ ဂျပန်ဖူဂျီတီဗွီ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရိုက...
Myanmar Model - Wutt Hmone Shwe Yee | ဝတ်မှုန်ရွှေးရ...
John Piccoli ရဲ့ Crazy Cool Art
Samsung Galaxy S5 Octa Core Review - Wireless Char...
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch L Ultrabook Review...
Myanmar Beautiful New Face Model : May Myat Noe
အပေါစားဆန်ခြင်းနှင့် Sexy ကျခြင်းမှာ ကွဲပြားကြောင်...
ဒါဖတ်ပြီးမှ ကိုယ်ပိုင်ပညာသင်ကျောင်းများတွင် ကျောင်...
မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Junction Square မှာ ကျင...
Facebook style blogger template လိုချင်ရင်...
Strider 2014 Reloaded PC Game With Key
How to Hide Stock Apps in iOS 7.1
International Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) ကို Roo...
Android Device တွေမှာ video editing လုပ်ဖို့ အကောင...
Miss 27th SEA GAMES Myanmar Finalist များ ရဲ့ Tour...
မတ်လ (၂၈) မှ (၃၀) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်၊ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်...
Asus ET2322INTH All In One Review
HTC က မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ HTC One M8 Smartphone အသစ်.....
Hoops Shape Colorful Plastic Watches For Girls
သင်္ကြန်မှာ မိသားစုနဲ့ ဘုရားဖူးထွက်မယ့် သွန်းဆက်
အနန္တောအနန္တဂုဏ် ခြစားသွားကြသည့် ကျောင်းဆရာအချို့အြေ...
ကင်ဂျုံအန် ဆံပင်ပုံစံအတိုင်း ကျောင်းသားများညှပ်ရန်...
မေလမှာ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲ လုပ်မယ့် ဒေါက်တာ အောင်မျ...
ငွေအကြွေစေ့တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာလက်ရာ...
Unique Tattoo Art...
ပရိသတ်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပဲ ခံစားတယ် ဆိုတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရ...
ထိုင်းရောက် ပုံမှန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရ မြန်မာအလုပ်သ...
သြစတြေးလျားကွင်းစ်လန်း တက္ကသိုလ်ဖောင်ဒေးရှင်း ကျောင...
ပညာသင်ဆုနဲ့ အာရှတိုက်သားများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးခံစ...
ဉာဏ်ရည်ခြားနား ကလေးငယ်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမ...
သဘာဝတရား နှင့် အထူးပြုလုပ်ချက် နံရံနောက်က အလှတရား
မတ် ၂၈ ရက်နေ့ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် – ဒေါက်တာထွန်...
Myanmar Model - Thandar Bo | သန္တာဗိုလ်
Myanmar Model - Moe Ya Thaw | မိုးယသော်
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ...